လူကြီးမင်းတို့၏ စက်ရုံနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှ မှာယူသောစက်ပစ္စည်းအားလုံးကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် တင်သွင်းရောင်းချပေးလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ ၄င်းစက်ပစ္စည်းမှာ ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ကွန်ကရစ်ဖြတ်စက်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကအသုံးပြုပြီး ကတ္တရာခင်း၊ လမ်းခင်း၊ ကွန်ကရစ်ခင်းရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။ အင်ဂျင်ပါဝါသည် တရုတ်ဒီဇယ်အင်ဂျင် ၂၂ မြင်းကောင်ရေအား ရှိပါသည်။ Other Specifications; Working Dimension – 1800 * 505 * 1050mm Running Speed – Manual Push Power (W) – 22hp Driving Method – Manual
လူကြီးမင်းတို့၏ စက်ရုံနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှ မှာယူသောစက်ပစ္စည်းအားလုံးကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် တင်သွင်းရောင်းချပေးလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းကောင်းပါး အပ်ပါသည်။ ၄င်းစက်ပစ္စည်းမှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ဘိလပ်မြေဖျော်စက် အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
COSIN CYL31C တံဆိပ်လမ်းကြိတ်စက် (smooth wheel road roller) သည် အဓိကအားဖြင့် ကတ္တရာ၊ သဲမြေဆီလွှာနှင့်ကျောက်စရစ်များပေါ်သို့ ဖိရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်မြက်ခင်းများ မျက်နှာပြင်ညှိဖို့အတွက်များလဲ အသုံးပြုကြသည်။ CYL31C ၏အင်္ဂါရပ် 1. ဟွန်ဒါအင်ဂျင်၊ သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စက်ကိုစတင်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်း 2. သေးငယ်တဲ့ဧရိယာအတွင်းမှာပါ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ 3. ဟိုက်ဒရောလစ်ဒရိုက်စနစ်နှင့် Stepless အမြန်နှုန်း၊ Direction ပြောင်းရတာလွယ်ကူခြင်း။ 4.သယ်ယူရလွယ်ကူပြီး handrail ၏အမြင့်ယန္တရားထိန်းညှိခြင်း။ 5. NSK တည်နေရာ နှင့် MITSUBISHI V-ခါးပတ်။ 6. သံချေးမတက်၊ လှပသောဒီဇိုင်း။ လူကြီးမင်းတို့၏ စက်ရုံနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှ မှာယူသောစက်ပစ္စည်းအားလုံးကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် တင်သွင်းရောင်းချပေးလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ် ပါသည်။ ၄င်းစက်ပစ္စည်းမှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး လက်ကိုင်ပါ လမ်းကြိတ်စက် အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ စက်ရုံနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှ မှာယူသောစက်ပစ္စည်းအားလုံးကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် တင်သွင်းရောင်းချပေးလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ် ပါသည်။ ၄င်းစက်ပစ္စည်းမှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး လက်ကိုင်ကြိတ်ခွဲစက်/ ဖြတ်စက် အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ Keyang DG-100FB သည်လျှပ်စစ်ပါဝါ 750 watt၊ အင်ဂျင်လည်ပတ်နှုန်း 11000 rpm၊ ပါရှိပြီး အုတ်ကြွပ်၊ ကျောက် နှင့် ကြွေထည် တို့ဖြတ်တောက်ကြိတ်ခွဲရာတွင် စနစ်တကျအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၄င်းစက်သည်အရည်သွေးကောင်းမွန်၍ ရေစိုခံ ပြီးအသုံးပြုရာတွင်လွယ်ကူပါသည်။ သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပါသည်။ အော်တိုကာဗွန် စုတ်တံပါရှိပြီးစက်ချို့ယွင်းပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားကာကွယ်ပေးသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ စက်ရုံနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှ မှာယူသောစက်ပစ္စည်းအားလုံးကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် တင်သွင်းရောင်းချပေးလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ် ပါသည်။ ၄င်းစက်ပစ္စည်းမှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ပါ Planner အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ Electric Planner ၏ထူးခြားချက်များ -	Electric Planner သည် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့မှုရှိခြင်း။ -	Double Insulation ပါရှိခြင်း။ -	Depth work လုပ်ဆောင်ပုံထိန်းညှိပေးခြင်း။ -	blade ထိန်းညှိရန် လွယ်ကူခြင်း။ -	Cutting depth ကိုပေတံဖြင့်ထိန်းညှိပေးခြင်း။ -	အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အာမခံရှိခြင်း။
Rolling Door Roll Forming Machine ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ 0.45 – 0.5 mm အထူရှိတဲ့ အမိုးပြားများကို ထုတ်လုပ်ပေးခြင်း၊ လည်ပတ်မြန်နှုန်းမှာ တစ်မိနစ်တွင် ၁၅မီတာနှင့် ၁၈ မီတာရှိတဲ့အတွက် ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကို အဆင်ပြေစေပါတယ်။ အဓိက မော်တာအားမှာ မြင်ကောင်ရေအား ၁၅ ရှိပါသည်။ Roll Shalf Diameter မှာ ၇၅ မီလီမီတာမှ ၈၅ မီလီမီတာအထိ ရှိပါသည်။ ၄င်းစက်ယန္တရားများသည် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပြီး ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများကို Shwe Moe Kyei ကုမ္ပဏီမှ ပစ္စည်းအရည်အသွေးမှန် ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါသည်။ ထိုင်ဝမ် နှင့် အီတလီနိုင်ငံမှ သွပ်မိုးအချပ်များကို ကွေးခြင်း၊ ဖြောင့်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ လိုရာပုံသွင်းယူနိုင်ခြင်း စသည်ဖြင့်ပြုလုပ်ယူနိုင်သော စက်ယန္တရားများကို တိုက်ရိုက်ဖြန့်ချီ လက်လီလက်ကားရောင်းချပေး လျှက်ရှိပါသည်။ ၄င်းစက်ယန္တရားများသည်အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပြီး ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းသက်သာဖို့နဲ့ Project တွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ အပြီးအပ်နိုင်အောင်လို့ကတော့ Machine တွေကို အသုံးပြုမှ ရပါမယ်။ အမိုးမိုးရာတွင် အသုံးပြုတဲ့ ခေါင်ချုပ်သောသွပ်ဖြတ်စက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Ridge Capping Roll Forming Machine ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ 0.3 – 0.5 မီလီမီတာ အထူရှိပြီး၊ လည်ပတ်မြန်နှုန်းမှာ တစ်မိနစ်တွင်3မီတာနှင့်5မီတာခန့်ရှိပါသည်။ အဓိက မော်တာအားမှာ မြင်ကောင်ရေအား ၁၀ ရှိပါသည်။ Roll Shalf Diameter မှာ ၆၀ မီလီမီတာ ရှိပါသည်။ ၄င်းစက်ယန္တရားများသည် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပြီး ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး နှစ်ချက်ထွက် သွပ်ဖြတ်စက်များကို Shwe Moe Kyei ကုမ္ပဏီမှ ပစ္စည်းအရည်အသွေးမှန် ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါသည်။ Double layer Roof &amp; Wall Cladding Forming Machine ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ Upper Layer နှင့် Lower Layer ဟုနှစ်လွှာ ထွက်ရန်ပါရှိပြီး 0.3 – 0.8 မီလီမီတာ အထူရှိပြီး၊ လည်ပတ်မြန်နှုန်းမှာ တစ်မိနစ်တွင် 18 မီတာနှင့် 20 မီတာခန့်ရှိပါသည်။ အဓိက မော်တာအားမှာ မြင်ကောင်ရေအား ၁၅ - ၂၀ ရှိပါသည်။ Roll Shalf Diameter မှာ ၇၅ - ၈၅ မီလီမီတာ ရှိပါသည်။ ၄င်းစက်ယန္တရားများသည် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပြီး ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Corrugated Roll Forming Machine ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ 0.2 – 0.4mm FH, 0.4 – 0.6 mm SI အထူရှိပြီး၊ လည်ပတ်မြန်နှုန်းမှာ တစ်မိနစ်တွင် 20 မီတာနှင့် 50 မီတာခန့်ရှိပါသည်။ အဓိက မော်တာအားမှာ မြင်ကောင်ရေအား ၁၅ ရှိပြီး AC မော်တာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် hydraulic system အတွက် 10 HP နှင့် Flying shear အတွက် Servo7KW တို့ပါရှိပါသည်။ Roll Shalf Diameter မှာ ၇၅ - ၉၅ မီလီမီတာ ရှိပါသည်။ ၄င်းစက်ယန္တရားများသည် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပြီး ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများကို Shwe Moe Kyei ကုမ္ပဏီမှ ပစ္စည်းအရည်အသွေးမှန် ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါသည်။ ထိုင်ဝမ် နှင့် အီတလီနိုင်ငံမှ Corrugated Roll Forming Machine စက်ယန္တရားများကို တိုက်ရိုက်ဖြန့်ချီ လက်လီလက်ကားရောင်းချပေး လျှက်ရှိပါသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများကို Shwe Moe Kyei ကုမ္ပဏီမှ ပစ္စည်းအရည်အသွေးမှန် ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးနေပါသည်။ ထိုင်ဝမ် နှင့် အီတလီနိုင်ငံမှ Roof &amp; Wall Cladding Roll Forming Machine စက်ယန္တရားများကို တိုက်ရိုက်ဖြန့်ချီ လက်လီလက်ကားရောင်းချပေး လျှက်ရှိပါသည်။ Roof &amp; Wall Cladding Roll Forming Machine ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ 0.3 – 0.8mm အထူရှိပြီး၊ လည်ပတ်မြန်နှုန်းမှာ တစ်မိနစ်တွင် 18 မီတာနှင့် 20 မီတာခန့်ရှိပါသည်။ အဓိက မော်တာအားမှာ မြင်ကောင်ရေအား ၁၅ ရှိပါသည်။ Roll Shalf Diameter မှာ ၇၅ - ၈၅ မီလီမီတာ ရှိပါသည်။ ၄င်းစက်ယန္တရားများသည် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပြီး ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
HK mowers phip iron - CF312
Pioneer ကုမ္ပဏီမှတင်သွင်းဖြန့် ချီလျက်ရှိသော ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်စက်မှု့ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စ ည်းforklift ကိုရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။ဆောက်လုပ်ရေးသမားများအနေနှင့် လေးသော ပစ္စည်းများအား အမြင့်သို့ သယ်ဆောင်ပို့ ပေးရာတွင်လည်းကောင်း၊သံထည်ပစ္စည်းများအား မ ရွှေ့ ရာတွင်လည်းကောင်း forklift ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ပစ္စည်း များကိုရွှေ့ ရာတွင်လျင်မြန်လွယ်ကူသည့်အပြင်အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းသက်သာသောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေနှင့် အမြင့်တင်forklift ကိုအသုံးပြုသင့်ပါသည်။အရောင်များမှာလည်း အဝါရောင်၊အပြာရောင်၊လိမ္မော်ရောင်၊အဖြူရောင်စသော အရောင်များစုံလင်စွာရှိပါသည်။ ဒါကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေနှင့် စက်ရုံသုံး၊ဆောက်လုပ်ရေးသုံး ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းသက်သာသော အမြင့်တင် forklift စက်ကိုဝယ် ယူလိုပါက Pioneer(Machinery &amp; Power Tools)ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှာယူ နိုင်ပါသည်။
Pioneer ကုမ္ပဏီမှတင်သွင်းဖြန့် ချီလျက်ရှိသော အဆောက်အဦးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ် ငန်းသုံးပစ္စည်း ဘိလပ်မြေဖျော်စက်(cement mixing machinery) ကိုလူကြီးမင်းတို့အတွ က်ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။ယင်းဘိလပ်မြေဖျော်စက်သည် ဘီးပါသောကြောင့်ရွှေ့ရလွ ယ်ကူပြီး အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းသက်သာပါသည်။ဒါ့အပြင် ဖျော်စက်၏အလယ်ကိုယ်ထည် အားထိန်းချုပ်နိုင်ရန် စီယာတိုင်တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ယင်းဖျော်စက်၏ကာလာအရောင်များမှာ လည်း အစွန်းထင်အပေခံနိုင်သော အရောင်များကိုသာအသုံးပြုထားသောကြောင့်အပေတေ ခံပါသည်။၄င်းစက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘိလပ်မြေဖျော်ရာတွင် သိသာစွာလျင်မြန်လာပါလိမ့် မည်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးပြုသင့်သောဆောက်လုပ်ရေးသမားများအတွ က်အသုံးဝင်သော စက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အတွက်အချိန်ကု န် လူပင်ပန်းသက်သာသော ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ဘိလပ်မြေဖျော်စက်ကို ဝယ်ယူလိုပါက Pioneer(Machinery &amp; Power Tools)ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှာ ယူနိုင်ပါသည်။
Myanmar 's largest B2B marketplace for Building Machinery<span style="white-space:pre">	</span>. You can buy and sell building machine,construction machinery,heavy machinery,electric machine,construction tools,excavator,backhoe,construction equipment,concrete mixer,skid steer,heavy equipment backhoe for sale,wheel loader,backhoe loaderin Myanmar. You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom.